Ahoana ny fomba hisorohana ny saka tsy hiala ao an-trano | Noti saka
Ahoana ny fomba hisorohana ny saka tsy hiala ao an-trano? Izany no fanontaniana apetratsika rehetra izay miaina miaraka amin'ny totohondry antsika indraindray. Ary io dia, na oviana na oviana atokantsika ho azy, na firy na firy ny fitiavantsika azy, ny fahalianana tsapany dia hanosika azy hivoaka ny varavarana raha vantany vao manana fotoana mety izy, sa tsy izany?
Eny, ny marina dia miankina. Raha ny marina eny Afaka manao zavatra maro isika mba hahatonga ny volo hahatsapa ho mahazo aina ao anaty trano ka tsy hanana izany filàna mafy hivoaka izany, ka ho mora kokoa ny hifehy azy. Tsy mino Ahy ianao? Tohizo ny famakiana, andramo ireto torohevitra ireto dia ho hitanao fa vetivety ianao dia hanomboka hanamarika ny fiovan'ny volonao.
1 Ahoana ny fomba hahatonga ny saka tsy te hiala ny trano
1.3 Omeo azy izay rehetra ilainy
1.4 Mandany fotoana kalitao amin'ny sakao
1.5 Mandria miaraka aminy
1.6 Omeo mpiara-miasa aminy izy
1.7 Arovy ny saka
2 Mandra-pahoviana no avelanao ho irery ny saka?
3 Inona no hatao raha miala sasatra ianao?
Ahoana ny fomba hahatonga ny saka tsy te hiala ny trano
Ny saka (indrindra ny lahy ary na dia tsy mandeha amin'ny laoniny aza izy ireo), dia mety hila hivoaka hizaha izao tontolo izao. Na dia manaraka ireto torohevitra manaraka ireto aza ianao dia mety ho hitanao fa tampoka dia te-hijanona ao an-trano ny saka anao satria manana izay rehetra ilainy izy.
Ny saka dia olona ara-tsosialy mila fanentanana sy fifandraisana, koa raha manolotra an'io isan'andro ianao dia tsy hahatsapa ny filana mivoaka any ivelany izy ireo hitady izany. Mandania fotoana kalitao amin'ny biby fiompinao isan'andro, ataovy lohalaharana izany amin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao isan'andro! Misy famantarana vitsivitsy afaka milaza aminao fa manirery izaitsizy ny saka:
Manaraka anao manodidina ny trano ary mitady fifantohana tsy tapaka
Fihetsika feno herisetra
Omeo ny entanao ho fampisehoana fa tezitra aminao izy
Ny saka, toy ny olona, ​​dia olona mahazatra. Izany no antony ilàn'izy ireo fanao mahazatra eo amin'ny fiainany andavanandro ary ho eo anilanao. Mifoha, fotoana hisakafoanana sns. Tian'izy ireo ny tranony ary raha miova na inona na inona ny fanaony mahazatra dia mety hahatsiaro ho voan'ny adin-tsaina na mitebiteby mihitsy aza ny saka. Ny fanovana fahazarana ary avelanao irery ny saka mandritra ny fotoana maharitra dia mety ho fanandramana fanovana mahazatra tsy mahomby sy fitadiavana fomba hanovana izany amin'ny alàlan'ny fivoahana any ivelany.
Omeo azy izay rehetra ilainy
Omeo azy ny lalao, ny fitiavana, ny fiarahana, ny fanazarana, ny saka saka raha azo atao ... ny saka, raha mahatsapa tena mahazo aina sy mandrisika ao an-tranonao izy dia tsy hahatsapa ny filàna handao ny trano. Ankoatr'izay, ny famelana azy hivoaka dia mety hiharan'ny loza mety hitranga aminy, toy ny lozam-pifamoivoizana, ady eo amin'ny saka, marary, voadonan'ny fiara sns.
Mandany fotoana kalitao amin'ny sakao
Tsy mitovy ny ao anaty efi-trano, ianao mipetraka amin'ny seza misy tànana ary ny saka eo ambonin'ny tany, toy izay miaraka miaraka amin'ny seza na amin'ny gorodona mifanerasera. Misy ny olona mieritreritra fa ny saka dia tsy mila an'io karazana fiheverana io, fa tena mahaleo tena izy ary ny hoe faly dia ampy ho azy izany, fa mieritreritra fa lesoka izany.
Raha tsy mifanerasera aminy ianao, raha tsy milalao miaraka aminy ianao ary raha tsy manome fitiavana azy ianao dia tsy afaka manantena azy ho miaraka amintsika isika rehefa mahatsapa izany isika. Noho izany, raha tiantsika ho saka sambatra sy ara-piaraha-monina izy io, mila mandany fotoana betsaka araka izay tratra isika. Ho fanampin'izay, tsy maintsy fantarintsika fa amin'ny tady tsotra na baolina kely dia afaka mifaly izy sy izy.
Mandria miaraka aminy
Matory saka? Eny maninona no tsy? Raha manahy momba ny katsentsitra ianao, ny toeram-pitsaboana biby sy ny fivarotana biby dia mivarotra antiparasitika izay hamongorana ireo katsentsitra ivelany (kongona, parasy, sns.) ary ny ao anatiny (earthworms). Raha sanatria ka manana ianao allergy ny biby na marary ny volony, ny safidy tsara indrindra dia ny tsy amin'ny fandriana, fa raha tsy izany ... matory miaraka amin'ny saka no fialan-tsiny tonga lafatra hanamafisana ny fifandraisana.
Ary ny saka mandany ny alina miaraka amin'ny olony, dia volom-borona mahatsapa tena tiana. Ka tsy mila mitady fitiavana any ivelany ianao.
Omeo mpiara-miasa aminy izy
Raha mbola afaka mividy izany isika, ary raha mbola manana saka ara-piaraha-monina isika, mety mahaliana ny manome azy saka saka izay azony lalaovina raha tsy eo intsony isika, ary maninona no tsy lazaina izany? Ka io trano io dia mahafinaritra indroa. Izaho dia miaina miaraka amin'ny fivelarana 5 izay, na dia mahazo alalana hivoaka any ivelany aza izy ireo satria monina eo amin'ny manodidina mangina izahay, dia mivoaka mandritra ny fotoana fohy amin'ny maraina ary iray hafa amin'ny tolakandro, ary mandany ny andro sisa fatoriana ary milalao.
Ny faralahy (Sasha, teraka tamin'ny 2016, sy Bicho, tamin'ny 2017) dia tsy nivoaka mihitsy, ary mahafaly ny mahita azy ireo mihazakazaka. Rehefa tonga ny olon-dehibe (Keisha 7 taona, Benji 5 taona, ary Susty 11 taona) dia manao toy ny fianakaviana mifamatotra akaiky izy ireo; tsara saika. Ny marina dia i Susty dia arabe mihoatra ny trano, ary tena mahaleo tena. Fa miaraka amin'ireo hafa dia manana fotoana mahafinaritra izy ireo.
Noho izany, raha ny marina, raha afaka mikarakara saka faharoa ianao ary liana amin'ny fitomboan'ny fianakaviana dia aza misalasala. Mazava ho azy fa mba handeha tsara ny zava-drehetra tamin'ny andro voalohany, dia mamporisika anao aho hanaraka ny torohevitray.
Raha tsy mikasa ny hamela ny saka handao ny trano mihitsy isika, na satria mipetraka amin'ny tanàna iray na tanàna be mponina isika, na satria manahy isika fa mety hisy zavatra hitranga aminy, dia mila manao izay rehetra azo atao isika mba hisorohana azy tsy hiala. . Ary ahoana no anaovana izany? Mametraka harato eo am-baravarankely izay azontsika jerena amidy amin'ny fivarotana vokatra biby, na ara-batana na an-tserasera. Eto izahay mamela anao hanome tolotra vitsivitsy hahafahanao mahazo azy mora foana:
Bella & Balu Red ho an'ny ...
koa, tokony hataontsika asio mihidy hatrany ny varavaran'ny trano, satria na dia ny tsy fitandremana kely aza dia afaka nivoaka ny volony.
Mandra-pahoviana no avelanao ho irery ny saka?
Ny antony iray te-hiala ny trano ny saka dia satria irery izy ary mila manana traikefa. Ankoatry ny fiheverana ny torohevitra nomenay anao etsy ambony dia tsara raha manana saka saka ho an'ny saka ianao ary mifampitantana orinasa rehefa tsy eo koa ianao. zava-dehibe ny hahafantaranao ny fotoana tokony avelanao irery ny saka, raha sanatria tsy afaka manana saka mihoatra ny iray ianao na inona antony.
Na dia marina aza fa ny saka dia fantatra amin'ny fahaleovantenany, ny zava-misy dia mila fiaraha-miasa sy fitiavana hatrany izy ireo. Raha mandany fotoana maharitra irery any an-trano izy ireo, dia mety tsy ho faly ary ho kivy mihitsy aza.… Ary antony iray mahatonga ny sasany handositra na te hiala ny trano.
raha ny marina tsy misy na inona na inona mitranga satria avelanao irery izy ireo na roa na roa andro raha toa ka karakarain'izy ireo ny filany fototraFa lava kokoa izy ireo dia mety hanana fotoan-tsarotra ara-pihetseham-po sy bebe kokoa raha tsy manana mpiara-milalao izy ireo. Ny saka dia tsy mila avela irery mandritra ny fotoana maharitra.
Raha mandeha fialantsasatra ianao dia tsy mila mandao ny saka lava loatra satria na dia manana fidirana amin'ny boatina fako sy rano ary sakafo aza izy dia misy antony hafa mety hahatonga azy te hiala trano sy hitety an'izao tontolo izao.
Inona no hatao raha miala sasatra ianao?
Raha ohatra ka manana aretina mitaiza ny saka anao ary mila fanafody, ny tsara indrindra dia ny hamelana azy amin'ny tanana tsara, toy ny any amin'ny hopitaly veterinera ahafahan'izy ireo manome izany fikarakarana rehetra ilainy izany.
Hevitra iray hafa ny hoe raha mikasa ny handao ny trano mandritra ny fotoana lava ianao ary ny saka dia tsy manana aretina mitaiza, azonao atao ny milaza amin'ny namana na mpifanila trano aminao mba hijanona ao an-tranonao hikarakara ny saka anao. Io no safidy tsy dia misy dikany indrindra amin'ny saka ary ny mahasoa indrindra anao. Azonao atao ihany koa ny mandoa vola ho an'ny mpiompy matihanina azo itokisana hikarakara ny saka ao an-tranonao mandritra ny fotoana tsy anananao.
Manantena aho fa nahasoa anao io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Ahoana ny fomba hisorohana ny saka tsy hiala ao an-trano
Gloribel Perez Hernandez dia hoy izy:
Salama, mahaliana ahy ny saka ary manan-droa aho, kely telo volana sy efa-taona ary tsy mifankatia izy ireo, saro-piaro be ilay kely, tsy hitany izay omeko ny firaiketam-po amin'ilay lehibe dia manaikitra azy izy, ary raha manana an'io olana io aho dia be ny rano mandevoziny, saingy rehefa mamihina azy aho dia very ny ahy ary maharary izany dia tsy azoko ilay iray izay sady mitomany aho izy rehefa tadidiko izy dia tiako felines na dia mampidi-doza aza izany.
Valiny tamin'i Gloribel Perez Hernandez
Amin'ny telo volana dia te-hilalao ilay saka, ary raha manao izany dia mitroka sy manelingelina ny olon-dehibe satria… alika kely io. Rehefa mandeha ny fotoana, ny saka olon-dehibe dia afaka manakana ny tongony (na ny tena izy, ny paokony). Afaka mampianatra koa ianao tsy manaikitra efa aza mikorapaka amin'ny faharetana sy ny fikirizana.
Camila. dia hoy izy:
Salama, manana saka (lahy) iray vao feno herintaona aho, nefa tena mania izy, nanomboka tsy nankasitraka azy ny reniko satria feno volo ilay saka nefa ... indray andro dia nentiko nivoaka teo amin'ny faran'ny izy ary avy eo navelako natory teo izy Nanomboka zatra ilay saka fa 15 andro teo ho eo fotsiny dia avy eo nandro azy sns sns ary navelako niditra indray fa nanomboka nisy ny olana hafa, ary avoakako indray izy .. . fa izao dia manenjika ny saka napetrako eo aminy ny akanjo ba nataony noho ny hatsiaka dia avelako ho azy ny cassia mafana sy ny sakafo ao aminy ary avy eo misy saka izay tonga manala azy ary manafika azy ary mahatonga azy ireo hiady, fa satria tena simba ny saka dia tsy miady izy ary satria indraindray izy ireo dia nandratra azy ary koa saka iray izay tsy te hitoe-jaza dia nokapohiny izy avy eo satria rehefa nanomboka nahita izany karazana tsy fanelingelenana izany aho mandra-pilazako ny reniko hoe nandratra azy izy ireo, ka nanapa-kevitra izahay ny hitazona azy amin'ny alina (manana trano izahay eo amin'ny zaridaina), ary teo dia nanomboka nilamina izy nefa izao nanapa-kevitra ny Neny hamoaka azy indray ary anio no ho voalohanyandro fitsaharana ary mampatahotra ahy ny hamela azy eo satria ny saka na ny saka no nikapoka azy ary ny marina dia satria potika be izy dia tsy mahay miaro tena zato, ta, tsara matahotra aho fa mihinana zavatra iray izy na misy zavatra manjo azy na tsy miverina izy, noho izay antony nandehanako taty izay dia nieritreritra ny hanipy azy aho nefa na izany aza tsy tian'ny reniko izy ao anatiny na ao an-trano, inona no azoko atao?, mba valio avy hatrany.
Valiny amin'i Camila.
Ny fandefasana azy tsy ho ela no vahaolana. Izy io dia hisorohana ireo olana nateraky ny fihetsiky ny hafanana (toy ny saka hafa miady aminy), ary raha tsy izany dia hampihena ny loza mety hialan'ny biby koa izy io.
Rai dia hoy izy:
Salama, manana Siamese 5 volana aho ary tsy manan-kialofana izy nefa tsy manana tranoko manokana hanidy ny varavarankely ary safidy hafa izany mba tsy hialany? zavatra tsy vita an-trano namboarina ho fanafody?
Mamaly an'i rai
Soso-kevitra ny hitondra azy ho entina any anaty vatam-paty, satria amin'ity fomba ity dia tsy hanana faniriana be loatra na mila any ivelany izy.
Azonao atao koa ny mametraka ny harato eo am-baravarankely, izay tena kely vidiny ary afaka mamonjy ain'olona.
Margaret Valencia dia hoy izy:
Salama, manana saka kely 3 volana sy alika kely 1 taona aho, mifandefitra izy ireo ary indraindray milalao dia fantany fa samy ao an-tranoko izy roa ... ny fanontaniako dia ... potika fotsiny mety ho namana tsara ho an'ny zanako vavy sa mety ho alika koa?
Valiny tamin'i Margarita Valencia
Salama Margie na Salama Margarite.
Miankina amin'ny saka tsirairay izany. Toy ny ataontsika ihany fa tsy ny saka rehetra toa ny saka rehetra na ny alika rehetra.
Ankehitriny, holazaiko aminao koa fa raha mifanaraka amin'ny alika ianao, ny fametrahana saka faharoa dia mety hanimba ny zava-drehetra.
Indraindray tsara kokoa ny tsy manao vivery ny ainy ary mamela zavatra toa azy ireo.
Maru dia hoy izy:
Homebody ny saka ko, narary izy ary tsy maintsy nomeko fanafody an-keriny, ary avy eo dia nanomboka nivily lalana izy ary nihinana fotsiny, tsy haiko ny mampody azy ary tsy te hiala, azafady mba ampio aho
Valiny tamin'i Maru
Mila manararaotra ny fotoana laninao miaraka aminy ianao. Mipetraha eo akaikiny, safosiho moramora izy eo am-pisakafoana (ary indroa fotsiny, ara-dalàna raha tsy mamela mihoatra izany izy), sokafy ary akimpio moramora ny masony rehefa mijery azy ianao (izany no hataonao lazao aminy fa tianao izy), Mipetraha na mandry eo amin'ny sezalà ary asao izy hiakatra, milalao baolina na tadiny miaraka aminy.
Amin'ny faharetana dia mety hahazo ny fahatokisan-tenany indray ianao.